Farmaajo: “Dowladdu waxa ay bixisaa mushaarka 16-kun oo Macalin” | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Farmaajo: “Dowladdu waxa ay bixisaa mushaarka 16-kun oo Macalin”
Farmaajo: “Dowladdu waxa ay bixisaa mushaarka 16-kun oo Macalin”
Madaxweynaha Dowladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay munaasabadda maalinta Macalinka Soomaaliyeed 21-ka Nofeembar ayaa soo hadal qaaday doorka Dowladdu ay siisay Bareyaasha ka howlgala dugsiyada ay maamushu Dowladda Soomaaliya.
“Waxaa bogaadin mudan dadaalkii joogtada ahaa ee Bareyaasha Soomaaliyeed ay ku bixyeen Waxbarashada xilli aysan jirin dowlad ku garab istaagta, kana shaqeysa kor u qaadidda noloshooda, tayadooda iyo haqabtirka baahiyaha waxbarasho”. ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in Tirada Macalimiinta Dowladda u diiwaangashaneed ay gaareysay 9-Kun oo kaliya, halka haatan Dugsiyada Dowladda ay dhigaan in ka badan 16-kun oo bare sida uu hadalka u dhigay.
“Dalkeennu maanta waxa uu ku tallaabsaday horumar weyn oo dhanka dib u habeynta iyo tayeynta nidaamka waxbarashada ah, iyada oo la hirgeliyey Manhaj Qaran oo mideysan, kana turjumaya baahiyaha garasho iyo aqooneed ee carruurta Soomaaliyeed”. ayuu yiri Madaxweynaha JFS.